Kulan looga hadlayay wax u qabashada bulshada Degmada Buurhakaba oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kulan looga hadlayay wax u qabashada bulshada Degmada Buurhakaba oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO”
Kulankan ay Muqdisho ku yeesheen odoyaasha dhaqanka, waxgaradka iyo aqoonyahanka ka soo jeedda degmada Buurhakaba ee gobolka Baay ayaa looga hadlayay sidii maamul ku yimaadaa rabitaanka shacabka looga hirgelin lahaa degmadaasi.
Kulanka ayaa intii uu socday lagu soo bandhigay sawirro iyo astaamo muujinaya Degmada Buurhakaba iyo saamaynta burburkii ku yimid kaabayaashii adeegga bulshada, waxaana a isku weeydaarsaday aragtiyo la xariira habraaca loo marayo maamul ay yeeshaan dadka deegaanka iyo sida loo soo xulayo hogaaminta bulshada degmadaasi.
Dhinaca kale kulanka ayaa la is ku soo qaaday dhibaatooyinka beni’aadaminimo ee ka jira degmada Buurhakaba iyo sidii dadka ay uga soo kabsan lahaayeen duruufihii adkaa ee ay soo mareen.
Axmedeey Aadan Buule oo ka mid ah aqoonyahanka kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay dhibaatooyin ka jirto degmada, isla markaana loo baahanyahay in wax loo qabto bulshada degmadaasi ku nool.
“Dhibaatooyin xagga beni’aadanimo ayaa ka jirta degmada Buurhakaba, marka waxaan kaloo rabnaa in la helo qorshe ah sida maamul ku yimaada rabitaanka shacabka loo heli lahaa, si bulshada ay u noqdaan kuwa hela adeegyada aas aasiga u ah” ayuu yiri Axmedeey.
Malaaq Maxamed Sheekh Mukhtaar oo isna goobta ka hadlay ayaa xusay in Xildhibaanada baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolka Baay ay u istaagaan sidii loo heli lahaa rabitaanka shacabka, waxaana uu intaa ku daray in dhankooda ku dadaali doonaan sidii arrimahaasi loo heli lahaa.
Sawir Qaade:- Sakariye Qoryooleey
Madaxweynaha oo ka tacsiyeeyay geerida Xildhibaan Xuseen Bantu
kulan looga hadlayay daryeelka caruurta darbi jiifka ah oo Garoowe lagu soo gabagabeyay